Ngathi-Hebei Yuniu Fibreglass Manufacturing Co., Ltd.
Izibonelelo zethu ezixhotyiswe kakuhle zibalulekile ekukhuleni nasekwandiseni imisebenzi yeshishini lethu. Izixhobo ezintsonkothileyo nezala maxesha zisinceda ukuba siphucule iimveliso zeGlasi yeFayibha ngokufanelekileyo. Izibonelelo zethu zisasazeke kwindawo enkulu kwaye zahlulwe zayiyunithi yokuvelisa, icandelo lomgangatho kunye neyunithi yokugcina.
Icandelo lethu lemveliso lixhotyiswe ngoomatshini beenjongo ezizodwa kunye nezixhobo eziyimfuneko kunye nezixhobo. Ngokusetyenziswa kwaba matshini, siyakwazi ukuvelisa iimveliso zethu ngobuninzi kwaye sihlangabezane neemfuno zabaxumi bethu.
Inkampani yethu inesebe lethu elikhethekileyo lobuchwephesha emva kokuthengisa, iimveliso zikonwabele udumo oluphezulu kwezasekhaya kwaye zithandwa kwimarike yamanye amazwe nazo.
Umsebenzi wethu kukusebenzela ukuthengwa kwezinto ezihlanganisiweyo zehlabathi, ukwenza ubomi babantu bukhuseleke ngakumbi, okusingqongileyo ngakumbi.
Wamkelekile intsebenziswano yeshishini ngeemveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo enyanisekileyo, ukuphumelela ingomso elihle kunye!
Siyaqinisekisa ukuba iimveliso zeGlasi zeFayibha zibonelela ngemigangatho ekumgangatho ophezulu. Abalawuli bethu abasemgangathweni bahlala bejonga lonke inqanaba lenkqubo yemveliso ukuqinisekisa umgangatho weemveliso zethu. Silandela iteknoloji yakutshanje kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho, eqinisekisa imigangatho esemgangathweni kunye nokubalulwa.
Inkampani iyakwazi ukubonelela ngomgangatho wokuqala weklasi kunye neemveliso eziphambili ngokulandela umkhondo ngokuzeleyo yi-BV, SGS kunye ne-ISO9001.
Ke ngoko, unokuqiniseka ngemigangatho yethu egqibeleleyo kunye nenkonzo.
Ukusukela oko yasekwa ngo-2012, kunye neqela ukuthengisa ogqibeleleyo ekhaya nakumazwe aphesheya iimveliso.Our zithengiswe kumazwe asibhozo anesithandathu ngoku sinesabelo sentengiso eYurophu, eMantla nase Mzantsi Melika, eOstreliya, eAfrika, kuMbindi Mpuma naku Mzantsi-Mpuma. Asiya.
Sinike ithuba, kwaye siza kukubuyisela ngolwaneliseko. Sijonge ngokunyanisekileyo ekusebenzeni kunye nawe ngesandla.